हलेसीको समस्या के हो ? - समायोजन खबर
समायोजन खबर खोटाङ, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ‘कोरोना संक्रमणको आशंकामा नौ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेक्रममा नेपाली कांग्रेस खोटाङका जिल्ला सभापति नरेश कुमार श्रेष्ठबाटै अवरोध भन्ने’ समाचार शुक्रबार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रशारण/प्रकाशित भयो ।
यो महामारीको संकट घडिमा यस्तो समाचार बाहिरएपछि राम्रै चर्चा पाएको छ । उदयपुरको कटारी अस्पतालको आइसोलेसनबाट नौ दिनअघि भागेका उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका–४, ठानागाउँका ३९ वर्षीय किर्तीमान नेपालीसहित उनका आफन्तलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले दुर्छिमस्थित स्वास्थ्यौकीको क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि नगरपालिकाले तयारी गरिरहेको बेला सभापति श्रेष्ठले अवरोध पु¥र्याएको भन्ने समाचारको बारेमा समायोजन खबर डटकमले नेपाली कांग्रेसका सभापति नरेश कुमार श्रेष्ठ र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर तथा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा ‘क’ सभापति इवन राईलाई सोधेको छ ।
नरेश कुमार श्रेष्ठ, सभापति नेपाली कांग्रेस खोटाङ,
मैले क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्नु हुन्न भनेको छैन । गाउँलेहरुले त्यहाँ दुर्छिम स्वास्थ्य चौकीमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा नराखौ बरु अरुतिर व्यवस्थापन गरौ भनेर अनुरोध गर्दै गाउँले आए । त्यही कुरा मैले मेयरलाई पनि भने । त्यसपछि सिडिओलाई फोन गरे यस्तो कुरा आएको छ है सिडिओ साव अनुकुल ठाउँमा भए अलिक राम्रो होलाहै भनेर सजेसन पनि गराए ।
गाउँलेहरुको कुरा मैले राखिदिन पाउने कि नपाउने ? भएको यति हो । गाउँलेहरुले नराख्न भनिदिनुस भन्दा मैले मेयरलाई भनेको हो । त्यसपछि यस विषयमा मेयरसँग कुनै संवाद भएको छैन ।
इवन राई, मेयर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका/नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा ’क’ सभापति
कटारीको आइसोलेसनबाट भागेको मान्छेलाई पत्ता लगाइ नियन्त्रणमा लिएर दुर्छिमको क्वारेन्टाइनमा राख्ने भयौ । राख्नलाई व्यवस्थापन गर्न म आफै गए । त्यहाँ जाँदाखेरी रुपेन्द्र राईले यहाँ हुदैन हलेसी लानुहोस भने ।
यहाँ क्वारेन्टाइन छ, दुर्छिमको मान्छे, क्वारेन्टाइन वस्तीभन्दा टाढा पनि छ । अर्को कुरा ति व्यक्तिलाई हामीले बाहिर सम्पर्कबाट विच्छेद गरेर कोठामा सुरक्षित ढंगले राख्ने हो । पहिलो कुरा उसले खानेवस्ने र प्रयोग गर्ने शौचालय बेग्लै हुन्छ । दोश्रो कुरा ऊ संक्रमित हो÷हैन प्रमाणित छैन । त्यसो हुनाले आतिनु पर्दैन, दुर्छिमको मान्छे दुर्छिमले नराखे पनि हलेसी राख्छ ? भनेको हुँ मैले ।
भएको त्यति हो । त्यसपछि म हिडे उहाँहरु (रुपेन्द्र लगायत)ले सभापति (नरेश कुमार श्रेष्ठ)लाई भन्नु भएछ । सभापतिले मलाई फोन गर्नुभयो । ठाडो भाषामा यहाँ हुदैन उतै हलेसी लगरे राख्नुस भने । मैले आ–आफ्नो वडामा राख्नुपर्छ भने उहाँले सर्मथन जनाउदै फोन राख्नुभयो ।
त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने मान्छेहरु उहाँ भएको ठाउँमा पुग्नु भएछ । सभापतिले फेरी के गरेको यो, त्यहाँ किन पठाएको भनेर भन्नु भो । क्वारेन्टाइन त्यही छ कहाँ राख्नु भनेर मैले पनि भने । यहाँ रोग फैलिन्छ/सर्छ हलेसीमा लगेर राख्नुस भनेर भन्नुभयो उहाँले । तपाई सभापति हो यस्तो कुरा नगर्नुस, सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो गरेर हुन्छ हलेसीका मान्छेले पनि मान्दैन नि । आखिरी तिनीहरु बाहिरी सम्पर्कमा हुदैन, सुरक्षित तरिकाले राखिन्छ भनेपछि सभापतिले तपाईको घरमा लगेर राख्नुस भन्नुभो । भएको यति हो ।
कांग्रेसका सभापति नरेश कुमार श्रेष्ठ र मेयर इवन राईसँग गरिएको कुराकानी समायोजन खबर डटकमसँग सुरक्षित छ । २०७६ चैत २४ गते दिउँसो ४ :५६ मा प्रकाशित